नेकपामा दाहाल र नेपाल ५०-५० अध्यक्ष , ९ बुँदे मापदण्डमा भयो यस्तो सहमति ! - VOICE OF NEPAL
नेकपामा दाहाल र नेपाल ५०-५० अध्यक्ष , ९ बुँदे मापदण्डमा भयो यस्तो सहमति !
९ फाल्गुन २०७७, आईतवार २२:२९
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालबीच संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने विषयमा सहमति भएको छ ।
पार्टीका सबै कमिटीहरुमा दुबै पक्षको ५०–५० प्रतिशत हुने गरी तयार पारिएको ९ बुँदे मापदण्डमा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
पार्टी कमिटीहरू तथा जनवर्गीय संगठनका विभिन्न तहमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुमा कमिटीको कुल सदस्य संख्यामा पनि ५०–५० प्रतिशत हुनेगरी बिशेष व्यवस्था गर्न दुवै अध्यक्षबीच सहमति भएको छ ।
मापदण्डअनुसार प्रदेश र जिल्लाका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज एवम् पार्टी कमिटीहरु तथा जनसंगठनका पदाधिकारीहरुमा रिक्त भएको पक्षबाट नै पूर्ति गरिनेछ । त्यसो गर्दा सामान्यतया ५० प्रतिशत हुने गरी मिलाउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
एमाले र माओवादीबीच एकता हुँदा ६०–४० को अनुपातमा एकता भएको थियो ।
सर्वोच्च संसद पुनस्थापनाको फैसला सुनाउन ब्यस्त , प्रधानमन्त्री ओली जन्मदिन मनाउन मस्त
अस्पतालको शय्याबाट बाबुरामको ट्वीट– ‘लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैं भो !’